Mpanara-maso GPS malaza ho an'ny olona mijaly noho ny Dementia | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Ny zokiolona dia matetika ny miaina olana ara-pahasalamana, mifandraika amin'ny fahitana, fandrenesana ary na ny fahatsiarovan-tena fotsiny aza. Ireo aretina ireo dia mety hiteraka olana lehibe, na mety hamoy havana aza ianao. Ho an'ireo karazana toe-javatra ireo dia noforonina GPS tracker ho an'ny be antitra; fitaovana manome alàlana ny fitadiavana olona.
Izy ireo dia fitaovana namboarina manokana ho an'ny be antitra sy ny antitra, miaraka amin'ny bokotra lehibe, fampiasa tsotra ary asa ilaina. Ireo rafitra fanaraha-maso amin'ny toe-javatra samihafa, miorina amin'ny karatra SIM na tambajotra GPS, ary tsy misy fifandraisan'ny feo roa sy amin'ny autonomi izay miovaova andro vitsivitsy mankany volana maromaro.
Fikarohana marobe no milaza fa ny 60% amin'ireo mararin'i Alzheimer dia mandao ny tranony tsy misy mpikarakara (ankizy, mpitsabo mpanampy, sns.). Mandehandeha mandritra ny ora maro ny maro an'isa. Ny marary dia manjary tsy misaina hatramin'ny niainany tamin'ny vatofantsika taloha izay tsy misy fahatsiarovana ankehitriny. Ny arabe, amin'ny endriny misy azy ankehitriny, dia toerana hafahafa izay tsy fantatrao.
Amin'ireny toe-javatra ireny dia tsara ny hananana teknolojia mamela hetsika haingana, toy ny GPS finday ho an'ireo be antitra, olona marary saina na Alzheimer. Amin'izany fomba izany dia hialantsika ireo toe-javatra mampihetsi-po, tsy amin'ny tenantsika ihany fa amin'ireo zokiolona koa, izay mety tsy mahay mifehy tsara ny tsy fisian'ny firindrany ary mampitombo ny olana. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana tsy misy fiafarana mahafaly dia latsaky ny 4 km miala ny tranony ilay lahiantitra.
Ny mpikaroka GPS ho an'ny zokiolona voan'ny dementia na Alzheimer dia mampihena ny risika fitadiavana fividianana toerana haingana raha misy fatiantoka.
Ny toerana azo anaovana consulted amin'ny telefaona finday, tablety na solosaina mifandray amin'ny Internet.
Alohan'ny hahazoana ny zokiolona iray dia alao antoka fa mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izany. Solontena ara-toekarena maro no mampiasa teknolojia izay mety tsy ilaina amin'ny toe-javatra sasany, toy ny mpitsoka Bluetooth.
Nahoana no tsara ny mampiasa GPS locator ho an'ny be taona?
Rehefa misy olona iray ao amin'ny fianakaviantsika mety ho very, manana olana amin'ny fitadidiana, Alzheimer, demainia, na aretina hafa, mpividy GPS dia fividianana manome antsika fiadanan-tsaina.
Ny fananana ireo olon-tiantsika mipetraka amin'ny fotoana rehetra dia mety ho safidy tsara indrindra amin'ny tranga tsy ahafahan'ny fotoana tsy ahafahantsika mijery hatrany. Amin'ireo tompon-toerana ireo dia afaka manala ny ahiahy isika, fantatsika ny fotoana rehetra ananan'ny olona mitondra azy.
Eto ambany no anitanay an-tsoratra ny fiasa lehibe amin'ny mpikaroka GPS:
Ny fisian'ny mikrô.
Fitaovana na bokotra "SOS".
Ny fisian'ny karatra SIM (tsy misy serasera amin'ny satelita, dia manome serasera GSM).
Mpiaro amin'ny andro ratsy ho an'ny fitaovana.
Io dia ahafahantsika manara-maso ny fihetsiky ny mpampiasa eo amin'ny sari-tany, ary mitazona lavitra ny fifandraisana.
Karazana gadget hitantsika
GPS tracker dia mety ho toy ny fehin-tanana na ny fehin-tanana, pendant, fiambenana, telefaona na fitaovana portable manokana.
Mpikambana an-tariby: ireo karazana telefaona ireo dia misy bokotra lehibe sy batery matanjaka sy mateza. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa manana jiro sy fiasa "fanampiana" (SOS) miaraka amin'ny bokotra mekanika ianao, hanamorana ny fidirana ho an'ireo be taona. Mamela anao hanaiky na handà antso amin'ny hetsika ianao amin'ny ankapobeny.
Wristwatch miaraka amin'ny mpampiasa GPS: manana telefaona natsangana izy, bokotra "SOS", ary ny maodely sasany dia manana fantsom-pitrandrahana tanana (noho izany fantatsika raha mitazona ilay famantaranandro foana ilay mpampiasa na tsia.).
Ny modely maro dia tonga miaraka amin'ny sensor, mba handrefesana ny onja ary hahitana ny fidinana maranitra.
GPS valiny lokan'ny: izy no iray amin'ireo fitaovana kely sy mora indrindra indrindra. Manana bokotra fanamaivanana izy, module GPS hahitana ny toerana sy sensor doka izay ahitanao ny toeran'ny vatana ary mandefa automativa ho an'ny mpiambina na olona tompon'andraikitra.
Fitaovana portable: mampiditra bokotra mekanika vonjy maika sy sarony mba hialana amin'ny rano sy ny loto, toy ny vovoka. Manana batterie mahery vaika izy io ary rehefa mihazakazaka ny bateria dia mampahafantatra ny mpitaiza amin'ny SMS ny mpitaiza.
Inona ary ahoana no fiasan'ny mpamorona GPS iray mankany amin'ny olon-dehibe?
Tsotra ihany ny fiasan'ity fitaovana ity. Mahazo data amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo zanabolana momba ny toerana misy ny mpampiasa ilay fitaovana, ka tsy voafetra ny elanelana. Miaraka amin'ny fanampian'ny karatra SIM nampidirina, dia nafindra ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana ny toerana.
Ny fanamarihana miaraka amin'ny angon'ireo antitra dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny:
Raha mila mahafantatra ny tena toerana misy ny mpampiasa ianao dia mila mandefa hafatra fohy ho an'ny karatra SIM izay ampidirina amin'ny tracker fotsiny.
Handefa ny hafatra mamaly amin'ny fianakaviana ny fitaovana miaraka amin'ny data GEO sy rohy mankany amin'ny sari-tanety (Google) miaraka amin'ny teboka misy azy io.
Ity karazana fampitandremana ity dia fomba iray ara-toekarena raha jerena ny fitrandrahana angovo, izany hoe ny GPS tracker dia miasa ao anatin'ity fomba ity amin'ny fampiasana telefaona mahazatra, noho izany dia tsy ilaina ny mampiasa smartphone.
-Ny rafitra fanaraha-maso mifandray amin'ny GPS tracker
Ny mpikarakara dia afaka manara-maso ny olon-dehibe mampiasa rindrambaiko finday, smartphone na tablety. Izy io dia azo atao amin'ny fitaovana rehetra indray mandeha.
Izy ireo dia mampiavaka ny fanjifana herinaratra avo lenta, tsy maintsy manana fifandraisana Internet amin'ny karatra SIM izay ampidirina amin'ny fitaovana fanaraha-maso ihany koa isika. Azontsika atao foana ny mametraka ny lahasa rehetra amin'ny alàlan'ny fampiasana baiko SMS.
Inona no tokony hotadiaviko rehefa mifidy mpikaroka GPS ho an'ny be antitra?
Amin'ny ankapobeny, ireo fitaovana ireo dia samy hafa amin'ny endriny. Lafiny iray lehibe tokony hodinihintsika ny fahafaha-manao (oh: ny faharetan'ny batterin'ilay fitaovana. Ireo singa hafa tsy maintsy omentsika lanja dia ny fitaovan'ny vita. Ohatra, ireo fitaovana lafo indrindra dia zara raha mandany angovo ary miasa haingana kokoa sy marimarina kokoa.
Ny anton-javatra hafa izay azontsika iombanana ny endri-javatra fanampiny toy ny detra fantsom-panafody na ny fanitarana ny fanitarana haingana, izay, raha toa ka misy fiovana tampoka eo amin'ny toeran'ny mpampita, dia hampahafantarina amin'ny alàlan'ny SMS vonjy maika. Ny kitapom-batana koa dia safidy tsara, miaro amin'ny toetran'ny toetrandro izy io.
Amin'ny modely GPS sasany, azontsika atao ny mampiasa perimeter GEO (fefy) hametrahana ny faritry ny sisintany, ka rehefa mandao ny faritra misy marika dia mandefa hafatra fampitandremana ny mpandeha.
Zavatra lehibe tokony hotadidina
Rehefa manaka ny bateria ny bateria dia hampahafantatra ny mpampiasa azy ny fitaovana.
Tsy fitaovana finday ny fitaovana, hany ka tsy manimba ny olona mampiasa izany.
Azonao atao ny mahita karazan-java-maranitra maro mifantoka amin'ny zokiolona amin'ny sokajy samihafa.
8842 Total Views 5 Views Today
Ireo mpanara-maso GPS avo indrindra ho an'ireo marary mijaly…